Ngo-HTML, kukhona izakhi eziningi kangaka, futhi ngayinye kuwo uhlukile ngendlela yabo. Ithebula - ezithakazelisa kakhulu, ethandwa futhi kuncike sina. Ngenxa wakhe, awukwazi kuphela ukunikeza ulwazi oluthile elula, kodwa futhi ukwakha uhlaka indawo.
Ngaphambili, cishe yonke webmaster zisebenzisa amatafula layout amasayithi. Ekuqaleni, etafuleni awusebenzi anayo. Ngakho-ke, kumelwe usebenzise isici block div ukumaka isayithi.
Uma ungafuni ukuba sihlale novice, ukujwayela ngokushesha ukuze wenze yonke into ngendlela efanele. Lokhu kubaluleke kakhulu ngolimi-HTML. Ithebula kufanele ibekwe ulwazi kuphela evamile (umbhalo, links, izinhlu, izithombe, nokunye. P.), Futhi hhayi indawo yonke iyonke.
Indlela yokwenza ye-HTML etafuleni?
Ithebula - isici eziyinkimbinkimbi esakhiwa inani elikhulu nezinye izakhi. Khumbula ukuthi uma udala amaseli noma imigqa njalo ngokushesha kudingeka ukubeka ukuvala ithegi. Kungenjalo-ke fly. Isibambi kusiphequluli uyobheka ukuphela kwalesi sakhi futhi, aze ayithole, konke kuzoqhubeka ukukufaka etafuleni. Umphumela walokhu uyoba iphalishi.
Uma ubhala iwebhusayithi ku "incwajana", bese konke kuyodingeka wenze ngezandla zakhe. Uma kumhleli sokugcina, ngokuvamile kuba inkinobho - "etafuleni faka", "faka isithombe" nokunye.
ISIBONELO 2 Ithebula 2.
ombhalo Umugqa wokuqala iseli wokuqala
umbhalo ulayini iseli wokuqala yesibili
umbhalo iseli lokuqala emgqeni wesibili
umbhalo iseli yesibili lomugqa wesibili
Tags futhi ukhombise isiqalo nesiphetho etafuleni. Tags
futhi - isiqalo nesiphetho komugqa. Nasendleleni efanayo ungaba iyiphi inombolo amangqamuzana ichazwe ngu tags futhi .
Umthetho main kuyinto: inani lamaseli emgqeni ngamunye kumele kube okufanayo. Kuyinto itafula.
Kodwa njengaseminyakeni umhleli Word ne-Excel, amaseli zingahlanganiswa nomunye.
Indlela ukuhlanganisa amaseli etafuleni?
Ukuze sihlanganise futhi asebenzise Colspan Rowspan ezivelele. Span elihunyushwe ngokuthi "isembozo" noma "agqagqene". Ngokwezwi nezwi lisho - ukumboza / ukuvala yeseli / irowu.
Inani le mfanelo icacise ukuthi imigqa eminingi noma amaseli uzovimbelwa. Lokhu okulandelayo isibonelo engokomfanekiso usebenzisa kokubili i-HTML izingxenye ethebuleni.
Kulesi sibonelo, umugqa wokuqala 3 sebehlanganisa amaseli usebenzisa imfanelo colspan = "3". Khona-ke iseli lokuqala yezinhlamvu yesibili welulela imigqa emine. Khumbula ukuthi elula / ukuhlanganisa kuphela cell yokuqala. impahla yakhe zisakazwa. Zonke eliza ngaphambi, ngeke kuze kuthinteke.
Uma une 5 amaseli ukuthi ufuna ukuhlanganisa kusuka 2 kuya ku-4, bese kudingeka nje enmbololweni iseli 2 ucacise colspan ngemfanelo = "3".
Qaphela inombolo slot 9 sibalo ngenhla. Kube sebehlanganisa ngokushesha futhi amaseli bese imigqa. Lesi senzo ngeke kuvimbele.
Bheka esinye isibonelo ukuze uvikele ulwazi. Njengoba ezinye udidekile attributes esikhundleni imigqa namaseli ngezinye izikhathi kuhlanganiswe.
Thatha abajwayelekile, icala esezingeni-HTML. Ithebula imigqa emibili lamaseli ezimbili ngamunye.
ikhodi kuyoba kanje.
Njengoba ubona, azikho imiphumela. Ungakwazi engeza ifremu, ucacise ububanzi nobude.
Ungase futhi ukudlala ukuqondanisa. Singasho kuqondaniswe kuzo zombili ukuphakama nobubanzi.
Qondanisa ukuze uqondanise ukuyaphezulu, bese valign - mpo. Yilokho miphumela.
Izimfanelo qondanisa futhi valign singasebenza wonke umugqa. Khona-ke wonke amaseli yawo izoba ngaphansi kwalezi zimfanelo.
Ngaphezu ithegi futhi
, kukhona ithegi ezengeziwe
. Eqinisweni-ke kuyinto Analogue of , kodwa isetshenziswa kuphela emgqeni wokuqala futhi liqonde. Ngokuzenzakalelayo, umbhalo
igxile futhi ngokugqamile.
Indlela ukuxhuma izitayela etafuleni?
Njenganoma yimuphi amathegi e-HTML, etafuleni kungenziwa iguqulwe esebenzisa izitayela. Udinga ukucacisa ifayela isitayela ekhanda noma isitayela ngomumo (njengoba kushiwo esihlokweni).
sefonti umndeni: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: # 666666;
Uma usho etafuleni, bese lesi sitayela kuzosebenza kuwo wonke amatafula ekhasini. Kasibili everyone. Kodwa, uma usebenzisa indlela yesibili, okhombisa igama ngokungenasizathu ngechashazi, bese lesi sitayela singasebenza kunoma etafuleni oyifunayo, kuyilapho nawe ungalushayi ezithinta abanye.
Sicela uqaphele ukuthi amakilasi ingasetshenziswa njengendlela umaka etafuleni kanye yeseli othize noma umugqa.
= " 100%" umngcele = "1">
umbhalo Umugqa wokuqala iseli wokuqala
Uma isitayela umculi endaweni ethile iphutha, umphumela ngeke ubone. Nokho, uma isitayela kukhona amaphutha, kodwa amagama ayafana, umphumela ngeke. ukhefana ngamunye noma ikholoni linendima ebalulekile.
izimfanelo engeziwe e amathebula
Yini izimfanelo kungenziwa kulotshiwe amakilasi isitayela? Kukhona izimfanelo eziningi ezisebenza ngokuqondile amatafula. Cabanga eyisisekelo ezingaba wusizo kakhulu.
Ongemuva kuseli / ithebula
ithebula umbala Uzimele / amaseli
Ban ukugoqa umbhalo yezinhlamvu.
Ububanzi yeseli / ithebula
Njengoba ubona, ukusebenzisa i-HTML ethebuleni kungaba lenqwaba "amathuluzi".
Beautiful wadala usebenzisa HTML amatafula. izibonelo
Ngenxa izitayela ungakha ezihlukahlukene ithebula enhle. Konke kuncike kulokho futhi ngendlela othanda ngayo. Kufana ukupheka. Izithako ziyafana, futhi izinketho eziningi izindlela eziningi.
Njengoba ubona, uma usebenzisa tags, ithebula kungenziwa siguqulwe ngale ukuqashelwa. imikhawulo kungenzeka kunqunywa amehlo akho engqondo.
Indlela ukukhweza umfanekiso disk
Ukusheshisa Isicelo. Umqondo idatha yesikhashana. Yikuphi ilondoloza amafayela esikhashana
Ibaluleke kangakanani namasongo zabesifazane
Izihloko leyakhiwe ngemabhokisi - 3 imibono fun imidlalo
Temperature Ugxumela ingane: izizathu, nalokho udokotela ukubhekana